Helitaanka Tubooyinka iyo Tubooyinka si loo yareeyo Isticmaalka Biyaha - Tubooyinka Jikada ugu Fiican 2021 | Tubooyinka Musqusha ee ugu Fiican | WOWOW qasabadaha
Bogga ugu weyn / blog / Helitaanka Tubaale iyo Talooyinka Tuubooyinka si loo yareeyo Isticmaalka Biyaha
2021 / 09 / 25 Qoondayntablog 2441 0
Shaqada qasabadaha waa qayb aad muhiim ugu ah ku dhawaad ​​guri kasta, iyo waxyaabahan oo kale waa in la rakibaa oo la hayaa si habboon si loo hubiyo inaad ka fogaato wixii dhibaato mustaqbalka ah. Shaqada noocan ah waa in had iyo jeer ay qabataa qandaraasle ruqsad haysta. Tan waxaa dhab ahaan u baahan gobollo iyo dhulal badan oo kala duwan, maadaama shaqo kasta oo aan ruqsad haysan ay tahay mid aan ammaan ahayn oo laga yaabo inay sharci darro tahay.
Tuubiste ayaa asal ahaan mas'uul ka ah fulinta hawlaha soo socda.
- Helidda iyo hagaajinta dillaacyada nidaamka gaaska iyo biyaha
- Beddel nidaamyadii hore ee tuubooyinka
- Rakibaadda iyo dayactirka khadadka biyaha
- Dayactir tuubooyinka biyaha dilaaca
-Ku-rakibidda aaladaha ka-hortagga gubashada iyo shaandhooyinka biyaha
Noocyada qalabka tuubooyinka
Guud ahaan, waxaa jira toban nooc oo tuubooyin ah oo kala duwan oo laga yaabo inaad u baahato inaad isticmaasho, in kastoo ay ku xiran tahay dhibaatada gaarka ah ee laga yaabo inaad la kulanto.
Biyo mareeno cusub. Tani waxay ku lug yeelan kartaa hagaajinta biyo -mareenka xiran ama rakibidda mid cusub.
Qasablaha gurmadka. Waxaa loo isticmaalay xaalado degdeg ah oo dheeraad ah waxaana la heli karaa wakhti kasta oo habeen iyo maalinba ah.
Tuujiye Gaas. Waxay kaa caawinayaan xaqiijinta in gurigaaga ama meheraddaadu ay gebi ahaanba ammaan tahay oo aysan ka jirin halis isticmaalka gaaska iyadoo la rakibayo mitirrada gaaska, dab -shideyaasha, biilasha iyo nidaamiyaasha.
Dayactirka musqusha. Tani waxay ugu horreyn ku lug leedahay rakibidda, dayactirka iyo dayactirka tuubooyinka la xiriira ka -saaridda wasakhda gurigaaga.
Guutooyin. Xaqiiji in biyaha roobabka culus si sahal ah uga soo baxaan saqafka inta lagu jiro cimilada xun.
Tuubooyinka cagaaran. Tani waxay gacan ka geysaneysaa ilaalinta biyaha qeybaha kala duwan ee gurigaaga, iyo sidoo kale yareynta culeyska guud ee saadka biyaha dadweynaha. Sidaas darteed, waxaad sidoo kale kaydin doontaa lacag mustaqbalka fog.
Tuubooyinka hagaajinta guriga. Tani waxay faa'iido leedahay haddii aad qorshaynayso inaad dhisato ama dayactirto gurigaaga, maadaama aad awoodi doonto inaad keydiso lacag iyo dhib adiga oo rakibaya dhammaan nidaamyada tuubooyinka habboon. 8.
Dayactirka tuubooyinka. Tani waxay gacan ka geysaneysaa hubinta in dhammaan nidaamyada tuubooyinka ee gurigaaga ay si fiican u shaqeynayaan.
Tuubooyinka Tan waxaa loola jeedaa rakibidda, dayactirka iyo dayactirka qalabka iyo tuubooyinka qaada biyaha qabow iyo kuleylka gurigaaga.
Tubbada Adeegga Farsamada. Wuxuu caawimaad ka geystaa rakibidda, dayactirka iyo dayactirka qalabka iyo dhuumaha kuleylka iyo qaboojinta nidaamyada guryaha la deggan yahay iyo kuwa ganacsiga.
Ma aragtaa adiga oo u baahan adeegyada tuubooyinka? Hubi inaad shaqaalaysiiso adeegyada tuubooyinka oo ku salaysan shaqada aad shaqaalaysiinayso, tusaale ahaan, beddelidda qasabadda khaldan waa u fudud tahay tuubiste xaafadda, laakiin rakibidda nidaamka tuubooyinka guriga oo dhan waxay u baahan kartaa tababar heer sare ah, waayo -aragnimo iyo xirfad.
Sheekooyinka shaqada tuubooyinka marki hore lama oggolaan karo
Waxaa laga yaabaa inaadan aqoonsanayn dhab ahaanta tuubbada marka la barbardhigo adeegga tuubbooyinka caadiga ah ee xirfadlayaasha Toronto. Xaqiiqdu waxay tahay jiritaanka sheekooyinka tuubbooyinka waxay ku adkeyneysaa milkiileyaasha guryaha inay qaataan go'aaminta tubbada saxda ah waqtiga saxda ah iyo hagida saxda ah. Looma baahna in la yiraahdo, sheekooyinka tuubooyinka waxay abuuraan jahwareerka ugu badan mustaqbalka fog, ka dibna, adeegyada tuubooyinka Toronto kuma fududa jeebka mulkiilaha. Kuwa soo socda ayaa ah khiyaamo kala duwan oo ah tas -hiilaadka tuubooyinka oo aan markii hore lagu heshiin karin si looga fogaado adeegyada tuubbooyinka
Qasabadaha daata ayaa caado u ah
Ma xusuusataa markii ugu horraysay markii qasabaddaadu ay daadanayso? Waa inaad ku fikirtay inaad adkayso ama dhawrto dhawr daqiiqo. Goor dambe, waxaad caadaysatay inaad caado ka dhigto qasabadaha. Dhab ahaantii, waxay noqotay wax iska caadi ah inaad aragto qasabad daadatay. Dhibaatada ugu weyni waxay timaaddaa marka biilka biyaha uu bilaabo inuu cirka isku shareero maxaa yeelay biyuhu waxay ka sii qulqulayaan tuubada daadsan. Hadda, ma aragtaa sida sheegashadan loogu khayaaliyey dhuumaha? Marka xigta ee aad fiiriso qasabadda daadsan, wac xirfadleyda xaafaddaada ee Biyo -gelinta Toronto.
Qarxiya kululeeyayaasha biyaha
Maanta, kululeeyayaasha biyuhu waxay noqdeen lama huraan guri kasta, xilli kasta ha eegeene. Mid ka mid ah shirkadaha ugu horreeya ee tuubooyinka tuubooyinka ee khubarada TPG ee Toronto ayaa leh, “Macaamiil badan ayaa u muuqda inay su’aal geliyaan badbaadada kululeeyayaasha biyaha maxaa yeelay waxaa looga digay marka la eego qarxinta kuleyliyeyaasha biyaha.” Kuleyliyeyaasha biyaha ma qarxaan. Haa, haanta kululeeyaha biyaha ayaa ka dillaaci karta dayactir la'aan. Si kastaba ha ahaatee, ma jiro wax la mid ah qarax ku jira buugga halista ee kululeeyayaasha biyaha casriga ah. Rakibayaasha kuleyliyaha biyaha ee maanta waxay la yimaadaan dammaanad iyo dammaanad. Wax kale oo aan ahayn, waxaa lagu talinayaa in adeegyada rakibidda laga helo rakibayaal khibrad leh.
Tuubooyinka daadsan waxay ka fiican yihiin tuubooyinka aan la daadin karin
Tuubooyinka daadsan ayaa ah kuwa aan la burburin karin waxayna sababi karaan dhibaatooyin isku xirnaanta mustaqbalka fog. Dhinaca kale, dhuumaha aan la daadin karin ayaa si deg deg ah hoos ugu dhaca oo sababa isku-buuqa yaraada ee mustaqbalka fog. Waxaa lagugula talinayaa inaad hubiso in tayada tuubooyinku ay aad u fiican yihiin ka hor intaadan rakibin tuubooyin aan daadsanayn. Marka laga reebo tan, dhammaan noocyada tuubooyinku waxay u baahan yihiin dayactir joogto ah, nadiifin xirfadeed, iyo beddelid dhammaadka noloshooda, isla sidaas oo kale waxay ku socotaa tuubooyin aan la daadin karin. Sidaa darteed, ha ka dooran tuubooyin biyo-raaci kara tuubbooyinka aan la daadin karin.
Talooyinka Tuubooyinka Si Loo Yareeyo Isticmaalka Biyaha Oo Lacag Loo Kaydiyo
Haddii gurigaagu u muuqdo inuu isticmaalayo biyo ka badan intii caadiga ahayd, waxaa jirta fursad fiican inaad meel ka dillaacdo. Tan waxa kale oo sababi kara tuubbooyin khaldan ama qalabyada iyo qalabyada oo aan u tamar badnayn sidii la rabay. Inaad haysato tuubiste xirfadle ah oo ku sameeya baaritaannada gurigaaga oo dhan ayaa kaa caawin doona inaad fahanto inta biyo ah ee aad khasaarinayso.
Xirfadlaha khabiirka ayaa kaa caawin kara yareynta isticmaalka biyaha adiga oo tilmaamaya meelaha aad ku keydsan karto biyaha.
Qasabadaha socodka hooseeya
Qasabadaha qulqulka hooseeya waxay kordhiyaan cadaadiska biyaha soo baxaya iyada oo aan la kordhin xaddiga biyaha la isticmaalo. Haddii aadan doonayn inaad beddesho qasabaddii hore loo rakibay, tuubisteagu wuxuu ku dari karaa shaandheeyeyaal yaryar qasabadda hadda jirta.
Musqulaha socodka yar
Fikradda socodka hooseysa ee yaraynta isticmaalka biyaha ee tuubada ayaa sidoo kale kaa caawin doonta yareynta xaddiga biyaha musqusha aad isticmaasho halkii biyo raacis. Iyada oo ku xidhan nooca musqusha aad iibsanayso, waxaad kaydin kartaa ilaa saddex gallon oo biyo ah ama ka badan biyo raacis kasta.
Hubi dillaacyada gudaha iyo dibaddaba
Fiiri dhammaan tuubooyinkaaga si ay u dillaacaan gudaha iyo dibaddaba. Ha iloobin inaad fiiriso tubooyinka mashiinka dharkaaga sidoo kale. Dhibic yar oo ka timaadda qasabadda ama biibiilaha ayaa laga yaabaa inay u muuqato wax aan muhiim ahayn, laakiin waqti ka dib, waxaad lumin kartaa boqolaal gallon oo biyo ah.
Fiiri qasabadaha/tubooyinka dibadda
Markaad hubinayso dhammaan tuubooyinkaaga gudaha iyo qasabadahaaga, hubi inaad dibadda u baxdo oo aad fiiriso qasabadaha iyo tuubooyinka gurigaaga dibaddiisa. Fiiri barkaddaada, tubbada kulul, ceelka iyo taangiga septic -ga sidoo kale.
Dib u warshadee biyahaaga cawlan
In kasta oo aadan u isticmaali karin biyaha cawlan wax karinta ama maydhashada, waxaad u isticmaali kartaa waraabinta cawskaaga ama dhaqidda gaadhigaaga. Greywater waa biyaha aad ka tagto markaad dhaqdo suxuunta, dharka ama qubaysato. Haddii aad rabto inaad si fiican u isticmaasho biyahaaga cawlan, wac tuubiste si aad ugu darto nidaam laba-beeb ah oo ururiya biyaha cawlan marka la soo saaro.
Marka isticmaalka biyahaagu ka sarreeyo sidii loo baahnaa oo aadan garanayn meesha ama waxa aad raadinayso, wac khabiir -gacmeed xirfadle ah. Waxay kaa caawin karaan inaad hesho dillaacyo waxayna kaloo ku siin karaan talo ku saabsan sida loo yareeyo xaddiga biyaha qoyskaagu isticmaalo maalin kasta. Dhowr baaritaan oo degdeg ah oo agagaarka gurigaaga ah ayaa ku siin kara jawaabaha aad u baahan tahay waxayna kaa caawin karaan inaad waqti iyo lacag ku badbaadiso.
Sababaha Ugu Wanaagsan Ee Loola Tashado Qandaraaslaha Tuubooyinka ee Ruqsadda haysta
Haddii aad doonayso in aad nadiifiso godad xiran ama aad ku rakibto tuubooyin cusub gurigaaga, waa inaad Northbrook ka heshaa tuubiste xirfadle ah oo ku siin kara adeegyo tuubooyin oo tayo leh. Shaqada tuubiste ma aha mid fudud maadaama ay ku lug leedahay dayactirka iyo rakibidda qasabadaha kala duwan, biinanka, tuubooyinka iyo makiinadaha oo aadan adigu kaligaa samayn karin. Shaqaalaynta qandaraaslaha tuubooyinka waxay ku siin doontaa adeegyo degdeg ah oo la isku hallayn karo waana maalgelin qiimo leh adiga dhawr sababood awgood.
Waa kuwan qaar ka mid ah sababaha loo kireysto tuubiste
Qandaraasle tuubooyin xirfad leh oo shahaado haysta ayaa ku siin doona adeeg aan caadi ahayn oo aan su'aal lahayn. Haddii ay tahay nadiifinta biya -mareennada xiran, dayactirka qasabadaha iyo maraakiibta, ama rakibidda kuleyliyaha biyaha iyo qalabka kale ee tuubooyinka, tuubiste wuxuu hubin doonaa inaad hesho adeegga ugu wanaagsan ee suurtogalka ah oo leh qalab tayo leh. Khabiirada xirfadlayaasha ah ayaa isla markiiba xallin kara dhibaatooyinka tuubooyinka.
Aqoonta iyo xirfadaha.
Iyada oo leh aqoon iyo xirfado baaxad leh, tuubiste xirfadle ah ayaa si sax ah kuugu adeegi doona oo had iyo jeer ku siin doona adeegyada tuubooyinka qalab sax ah. Tuubishuhu wuxuu si fudud u garan karaa sababta asaasiga ah ee biyo -mareennada iyo qasabadaha xidhmay iyo qalabka kale ee aan si habboon u shaqaynayn oo qaadi kara tallaabada ku habboon si wax looga qabto dhibaatada. Uma baahnid inaad ku barato tuubiste Northbrook dayactirka tuubooyinka maxaa yeelay isagu wuxuu xallin doonaa dhibaatooyinkan isaga oo leh boqolkiiba boqol sax ah iyo kalsooni.
Talo qiimo leh.
Shaqaalaynta tuubiste xirfadeed waxay kuu suurtogelinaysaa inaad hesho talo wax ku ool ah oo ku saabsan dayactirka iyo dayactirka qalabkaaga tuubooyinka maxaa yeelay tuubiste wuxuu yaqaan sida looga hortago biyo -mareennada xiran iyo sida loo ilaaliyo qasabadahaaga, qubayskaaga iyo qasabadahaaga si wanaagsan. Khubaradu maahan inay kaa caawiso dayactirka tuubooyinka, laakiin sidoo kale waxay kaa caawin doontaa dayactirka habboon ee qalabkaaga si ay u dheereeyaan noloshooda.
Adiga oo gacan ka helaya qandaraasle biyo -mareen ah oo xirfadle ah, waxaad kaydin kartaa lacag sababtoo ah tuubbuhu wuxuu kugula talin doonaa rakibidda qalabyada iyo tuubooyinka ugu dambeeyay si loo kordhiyo nolosha iyo ka shaqaynta qasabadahaaga iyo alaabta kale. Xirfadlaha wuxuu kugula talin karaa inaad beddesho qalabkii hore ee tuubooyinka oo kordhiya biilasha adeegga, tusaale ahaan, tuubiste wuxuu kugula talin karaa inaad ku beddesho kuleyliyahaagii hore biyo cusub oo loogu talagalay kuleylinta biyaha oo wanaagsan iyo isticmaalka korontada oo yar inta lagu jiro kuleylka degdegga ah.
Natiijooyin lagu qanco.
Qandaraasle xirfadle ah ayaa mar walba ku siin doona dayactirka tuubooyinka tayada leh iyo rakibidda alaab cusub oo tuubooyin ah, taasoo ku siinaysa qanacsanaanta boqolkiiba boqol iyo degganaanshaha maskaxda iyo soo celinta qiimaha buuxa ee maalgashigaaga. Adeegyada lagu kalsoonaan karo ee qandaraaslaha tuubooyinka ee xirfadda leh, waxaa laguu xaqiijin karaa in dhibaatooyinka dhuumaha si habboon loo xallin doono oo la heli doono dammaanad dayactir lacag la'aan ah oo lagu sameeyo qalabkaaga tuubooyinka. Dhakhtarka tuubbada ee ruqsad haysta ayaa kula xiriiri doona adiga oo bixinaya adeegyo tayo leh.
Hore:: Talooyin Ku Saabsan Ilaalinta Tuubooyinka Musqushaada Meel La'aan Iyo Biyo la'aan Next: Ku Samee Qorshe Qurxinta Musqusha Qubayska Musqulaha
2021 / 09 / 28 2344
2021 / 09 / 27 2301
2021 / 09 / 25 4320
2021 / 09 / 24 2507
2021 / 09 / 24 2394
Qaybaha qasabadda qasabka iyo alaabta
2021 / 09 / 24 1513